Headline Archives - Page 35 of 38 - BANDHIGA
Feb05 February 5, 2020 Headline, Wararka
Arimahaan ayaa soo baxaya iyadoo laga cabsi qabo tacadiyo…
Taliyaha ugu sareeya ciidamada Mareykanka ee Bariga Dhexe ayaa booqasho ku tagay dalka Ciraaq, iyadoo maamulka Trump uu ka shaqeynayo sidii u badbaadin lahaa xiriirka kala dhexeeya hoggaamiyeyaasha Ciraaq isla markaana uu joojiyo…
Jaaliyadaha shan dal ayaa dalka Sucuudiga waxaa uu ka cafiyay lacagtii lagaga qaadi jiray dal ku galka ama fisah dal ku jagalka kadib markii ay bixiin waayen iyadoo loo qabtay muddo 90 cisho ah in ay kaga baxaan dalka oo ka bilaabanaysa…
Diyaarad siday gaadiid dagaal iyo hub fara badan ayaa lagu soo warramayaa inay saaka ka degtay garoonka degmada Doolow ee gobolka Gedo.
Ilo lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in diyaaradaasi ay ka ambabaxday garoonka Aadan Cadde ee magaalada…
Afahayeen u hadlay…
Daadad daran ayaa ku qasabtay kumanaan kun oo qof oo ku nool New Zealand ee koonfurta Island in ay ka qaxaan guryahooda.
boqolaal qof oo dalxiisayaal ah ayaa saaka la sheegay inay ku xayiran yihiin meelaha fog fog ee Milford Sound.
Falastiin oo gaashaanka u daruurtay hashiiska ay gaareen wadamada Sudan iyo Israel
Dalalka Sudan iyo Israa’iil ayaa isku raacay inay yeeshaan markii ugu horreysay xiriir diblumaasi kadib markii labada hogaamiye ee dalalkaas ay ku kulmeen dalka Uganda.
Ra’iisul Wasaaraha Israa’iil Benjamin Netanyahu ayaa kula…
La tuhmayaal ka tirsan Boko Haram ayaa weerar ka geestay waqooyiga dalka Cameroon maalintii shalay ahayd, iyaga oo halkaasi ku dilay laba ruux sida uu xaqiijiyay sargaal Dowladeed.
Weerarkaan ayaa dhanka kale lagu gubay 20 guri waxaana…
Madaxa siyaasada arimaha dibada Yurub Josep Borrell ayaa sheegay in talaabada Mareykanka ay xadgudub ku…
Milatariga Marooco ayaa la soo tabinayaa in ay la wareegeen sadax diyaaradood oo nuuca aan duuliyaha laheyn ee Drone ka loo yaqaan oo ay ka iibsadeen shirkada Heron ee dalka Israel.
Diyaaradahan ayaa lagu magacaabaa (UAVs) waxaana …
Ciidamada Dowladda oo la wareegeen gacan ku haynta Beled xaawo
Wararka ka imaanaya Degmada Beled Xaawo ee Gobolka Gedo ayaa sheegaya in Ciidamada Dowladda Somaliya, ay la wareegeen gacan ku haynta degmadaasi.
Ciidamada Dowladda oo boqolaal askari gaaraya ayaa xalay la wareegay Degmada Beled…
Janan oo gaaray Mandheera
Ka dib markii ay soo baxday waaran caalami ahaa oo Booliska Soomaaliyeed uu ku dalbaday in lagu soo xiro Wasiirka Amniga Jubbaland, Cabdirashiid Xasan Cabdinuur (Janan) ayaa wuxuu gaaray Degmada Mandheera ee Gobolka Waqooyi Bari …